अब यि बन्दैछन् संसारको सबैभन्दा धनि, जान्नुहोस उनको सफलताको कथा | Success Open University
सन् २०१३ साल देखी संसारका सबैभन्दा धनी ब्यक्ती हुन बिल गेट्स । तर यदि आजसम्म कसैले बिल गेट्सलाई पछाडि पार्न सफल भएको छ भने ति ब्यक्ती हुन जेफ बेजोस । जेफ बेजोस amazon का CEO फाउन्डर तथा संसारका पाचौ धनी ब्यक्ती हुन । सन २०१७ जुलाई २७ दिन amazon को शेयर भ्यालु बढेको कारण सेफ बेजोस ५ घण्टाको लागि संसारका धनी ब्यक्ती भएका थिए । तर फेरी amazon को शेयर घटेपछी उनी पुरानो ठाउँमा आएका थिए । तर जेफ छिट्टै बिलगेट्सलाई पछी छोड्ने छ्न । किनभने गएको बर्ष सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्नेमा जेफको नाम पहिलो स्थानमा थियो । गएको बर्ष उनको सम्पत्ति २ सय २ करोड नेपाली रुपैयाले बढेको थियो । यसको तुलनामा सेफको सम्पत्ति हरेक घण्टा २३ करोड रुपैयाको दरले बढी रहेको छ तर बिल गेट्सको सम्पत्ति हरेक घण्टा ८ करोडको दरले बढी रहेको छ । सेफको कमाइ बिल गेट्सको भन्दा तेब्बर बढी रहेको कारणले उनी सायद चाडै संसारको सबैभन्दा धनी ब्यक्ती बन्नेछन भन्ने विश्वाश गर्न सकिन्छ । उनी सफल हुनु को कारण हो amazon को सफलता । amazon अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो अनलाइन सपिङसेन्टर बनेको छ । आउनुहोस आज amazon का CEO तथा फाउन्डर जेफ बेजोसको बारेमा र उनको संघर्सको बारेमा जानौ ।
जेफ बेजोसको पुरा नाम Jeffrey Preston Jorgensen हो । उनको जन्म १२ जनवरी १९६४ मा न्यू मेक्सिकोमा भएको थियो । उनी पिता Ted Jorgensen र आमा Jacklyn Bezos को कोखबाट जन्मिएका थिए । उनकी आमा Jacklyn ले उनलाई १७ बर्षको कलिलो उमेरमा जन्म दिएकी थिइन । जब जेफ ३ बर्षका थिए, त्यतीबेला उनका पिता Jorgensen ले उनलाई र उनको आमालाई छोडेर गएका थिए । त्यसपछी जेफलाई उनकी आमा एक्लैले पालेकि थिइन । तर जब जेफ ७ बर्षका भए उनकी आमाले Meguel Bezos सँग विवाह गरेकी थिइन । त्यसपछी जेफ आफ्नो सौतेलो पिताको रेख देखमा हुर्केका थिए ।
उनले Wall Street (ईन्टरनेट सम्बन्धी काम गर्ने सस्था)कम्पनीमा ठुलो पदमा काम पाएका थिए । उक्त पोस्टमा काम गर्ने धेरैको सपना हुन्थ्यो । तर उनी उक्त काममा खुशी थिएनन । उनी आँफै केही गर्न चाहन्थे र उनले आफ्नो सपना पुरा गर्न भएको जागिर छोड्ने निर्णय गरे र जागिर छोडेर उनी अध्ययन गर्न थाले । उनले ४ / ५ महिना अमेरिकाको बिभिन्न ठाउँ घुमे र सबै रिसर्च गरे । रिसर्च गरेर उनले हरेक बर्ष २३००% ईन्टरनेट प्रयोग बढेको कुरा पत्ता लगाए । र उनको दिमाखमा Online Business को सोच आयो ।
बिहे पछी Meguel र Jacklyn जेफलाई लिएर Houston Texas बसाइ सरेका थिए । त्यहाँ जेफले River Oaks Elementary School मा ६ कक्षासम्म पढेका थिए । त्यसपछी Miami Palmetto High School बाट उनले आफ्नो हाई स्कुल सम्मको पढाई पुरा गरेका थिए । र उनले Princeton University बाट Science and Computer बाट उनले डिग्री लिएका थिए । जेफ सानैदेखी इलेक्ट्रोनीक सामानहरु खोल्ने त्यसलाई बनाउने गर्थे । उनले सानो उमेरमा नै उनको सौतेलो भाई आफुखुसी रूममा नछिरोस भनेर एक इलेक्ट्रोनीक आर्लम बनाएका थिए । जब उनी ४ बर्षका थिए, तब उनको स्कुलमा कम्प्युटर आएको थियो । त्यो समयमा उनको शिक्षकहरुलाई पनि कम्प्युटर चलाऊन आउँदैन थियो । त्यो कम्प्युटर जेफले साथीहरु सँग मिलेर त्यसको मेनु पढेर कम्प्युटर चलाऊन सिकेका र सिकाएका थिए । उनको यस्तै कलाको कारणले University Of Florida ले उनलाई Silver Knight Award (१९९२ ) र पढनको लागि स्कलरशिल दिएको थियो ।
पढाई सकिए पछि उनले Wall Street (ईन्टरनेट सम्बन्धी काम गर्ने सस्था)कम्पनीमा ठुलो पदमा काम पाएका थिए । उक्त पोस्टमा काम गर्ने धेरैको सपना हुन्थ्यो । तर उनी उक्त काममा खुशी थिएनन । उनी आँफै केही गर्न चाहन्थे र उनले आफ्नो सपना पुरा गर्न भएको जागिर छोड्ने निर्णय गरे र जागिर छोडेर उनी अध्ययन गर्न थाले । उनले ४ / ५ महिना अमेरिकाको बिभिन्न ठाउँ घुमे र सबै रिसर्च गरे । रिसर्च गरेर उनले हरेक बर्ष २३००% ईन्टरनेट प्रयोग बढेको कुरा पत्ता लगाए । र उनको दिमाखमा Online Business को सोच आयो । तर अब उनलाई के बेच्ने भन्ने चुनौती भयो । तर उनले धेरै अध्ययन गरेर बुक स्टोर खोल्ने निर्णय गरे ।
उनले भनेका थिए ” ६० बर्षको उमेरमा काम छोडेको पश्चताप हुन्थियो या हुँदैन थियो, त्यो त थाहा छैन तर यदी मैले मेरो सपना पुरा गर्न कोसिस् नगरेको भए सधैं पश्चताप हुन्थ्यो । र मैले जागिर छोडेर आफ्नो सोचमा काम गरे र म यहाँ छु ।”
सन् १९९४ मा आफ्नो घरको एक कोठामा करिब तीन लाख डलर लगानीमा ३ कम्प्युटर, ३ कर्मचारी सहित् CABBARA.com नामक website बाट उनले आफ्नो करियरको सुरुबात गरेका थिए । तर ३ महिना पछी उनले आफ्नो website को नाम amazon.com राखेका थिए । किनभने Amezon संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो र उनी पनी आफ्नो बुक स्टोरलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो स्टोर बनाउन चाहन्थे । १६ जुलाई १९९५ मा जेफले amazon मा पुस्तक बिक्री गर्न सुरु गरे । पहिलो महिनानै जेफले अमेरिकाको ५० राज्यमा पुस्तक बेचेका थिए । त्यसको लागि उनले धेरै मेहनत पनि गरेका थिए । कतिपय ठाउँ पुस्तक पुर्याउन उनी आँफै हातमा पुस्तक बोकेर जाने गर्दथे । यसरी उनले सेप्टेम्बर सम्ममा अमेरिका सहित् संसारको ५४ देसमा पुस्तक बिक्री सुरु गरेका थिए । यसरी उनी बिस्तारै अगाडि बढ्दै थिए सन् २००७ सम्म amazon एक चलेको Online Book Store बनिसकेको थियो । जब २००७ मा जेफले amazon Kindle E-Reader लन्च गरेका थिए । यस्को मद्घतले जो कोहीले पनि कुनै पनि पुस्तकलाई मोबाईलमा डाउनलोड गरेर पढ्न मिल्थियो । ७ नोबेम्बर २००७ को दिन Kindle बजारमा लन्च भएको थियो । Kindle लाई बजारमा यत्ती धेरै मन पराइयो कि लन्च भएको ६ घण्टामा Kindle को सबै पुस्तक बिक्री भएको थियो । Kindle ५ महिना सम्म Out Of stock भएको थियो । जेफको आइडियाले अमेरिकामा पुस्तक किन्ने तरिका नै बदलिदिएको थियो । पुस्तक किन्न समय खर्च गर्नु नपर्ने पुस्तक बोकेर हिंड्नु नपर्ने सबै मोबाईलमा नै हुनेहुँदा अमेरिकामा Kindle लाई धेरै रुचाइयो र amazon लाई संसारको सबैभन्दा ठुलो online store बनाउन मद्घत गर्‍यो । आज amazon ले बिभिन्न देसमा हरेक प्रकारको सामान बेच्ने गर्छ । जेफले amazon को साथसाथै Blue origin, Test Flights र अमेरिकाको सबैभन्दा पपुलर पत्रीका The Washington Post का मालिक हुन । उनले सन १९९३ मा Mackenzie Tuttle सँग विवाह गरेका थिए । र आज उनका ४ सन्तान पनि छन ।
आखिर यस्तो के थियो उनमा जो ३ जनाबाट सुरु भएको कम्पनीमा आज ३१७००० कर्मचारी काम गर्ने कम्पनी बनाये ? जेफको सफलताको मुल मन्त्र “यदी तपाईं जीबनमा भबिस्य सम्बन्धि सोच्नु हुन्छ भने तपाइलाई कुनैपनि कुरामा निर्णय लिन सजिलो हुन्छ र उक्त निर्णयले भबिस्यमा पक्षताप गर्नु पर्दैन ।” उनले भनेका थिए ” ६० बर्षको उमेरमा काम छोडेको पश्चताप हुन्थियो या हुँदैन थियो, त्यो त थाहा छैन तर यदी मैले मेरो सपना पुरा गर्न कोसिस् नगरेको भए सधैं पश्चताप हुन्थ्यो । र मैले जागिर छोडेर आफ्नो सोचमा काम गरे र म यहाँ छु ।” यो उनको वाक्यले केही गर्न चाहनेको लागि धेरै नै हौसल्ला अबस्य दिने छ ।
साभार : फेसबूक पेज सफलता प्रेरणाबाट
← नेपालका टप 10 धनि व्यक्तिहरू ! बिनोद चौधरीदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म तपाईले हेर्नु भयो यो फिल्म ? हरेक बाबुआमा र शिक्षकले हेर्नै पर्ने फिल्म →